Imizekelo yoyilo lwe-imeyile ye-HTML usebenzisa oopopayi
NgoLwesibini, Oktobha 20, 2009 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 UScott Hardigree
Kuye kwathiwa ukwenza i-imeyile esekwe kwi-HTML ngo-2009 kufana nokuphuhlisa iphepha lewebhu ngo-1999. Kubuhlungu kodwa kuyinyani. Ukwenza iikhowudi kukhokelela kwi-archaic kwaye, xa kuthelekiswa nokusebenza kwewebhu ye-2.0 yanamhlanje, ukusikelwa umda kukhulu.
Ke xa abathengisi be-imeyile bafuna ukuhambisa intshukumo, ukuqhuba ulwalathiso olubonakalayo kunye neefowuni ezenzweni basebenzisa ii-GIF zoopopayi. Ngaphambi kweFlash, oopopayi be-GIF elula yayingumyalelo wosuku.
Ukusetyenziswa kwe-imeyile ephathekayo kuyanda. Kutheni ubuza?
Ii-GIF zoopopayi zixhaswa kakuhle ngabathengi abakhulu be-imeyile kunye ne-webmail interface
Inceda abathengisi ukuba babonakale kwisihlwele
Okona kubaluleke kakhulu, kubonakala ngathi ziyasebenza!
Yomelele i-ROI kunye noPhilayo
Oku kutshanje Uvavanyo lwe-A / B nge-BlueFly ifumene i-imeyile yoopopayi edonsa kwi-12% yengeniso engaphezulu kune-non-animated efanayo. Ngokunjalo, le into yokuphonononga Kwintengiso yeSherpa, iLake Champlain Iitshokholethi zifumene ukonyuka kwe-49% kwintengiso yeKrisimesi ngokunxulumene nephulo lokusebenzisa ii-GIF zoopopayi xa kuthelekiswa nephulo lonyaka ophelileyo.
Nokuba ziluncedo ngakumbi
Okokuqala, abathengisi banokusebenzisa isixa esincinci sendawo ukuqaqambisa iimveliso ezininzi, izibonelelo ezizodwa, okanye ukubizela inyathelo, kunye nokunyusa amaxabiso okucofa kwiividiyo ezibanjiweyo. Abathengisi abakhaliphileyo banokusebenzisa oopopayi ukukhuthaza ukuskrolela kwii-imeyile ezinde (okanye ezithe tyaba).
Owona mcimbi uhambelana kakhulu kukuba ii-imeyile zoopopayi zinikezela njani kwi-Outlook 2007. Oko kukuthi, kuphela isakhelo sokuqala se-GIFs yoopopayi eboniswayo. Ke uya kufuna ukunxibelelana nomyalezo wakho kwisakhelo sokuqala, kwimeko apho kunokwenzeka. Uya kufuna ukugcina engqondweni ukuba ubungakanani be-GIF yoopopayi (kwii-kilobytes) bunokuchaphazela kakubi isantya kunye nokulandelelana kwemifanekiso yakho.
Imizekelo ye-imeyile yoopopayi
Imizekelo yokutsala umnxeba: IBhanana Republic, iLexus, IPiperlime
Imveliso yokubonisa imizekelo: Ukuphela Komhlaba, Art.com
Imizekelo yeVidiyo Twilight
Izinto ezingafaniyo. Imizekelo yokusebenzisa: UNorm Thompson, Ukubhabha
Ngokuqonda okuqinisekileyo kweenjongo zakho kunye ne umyili we-imeyile onamava Uyakwazi ukonyusa unqakrazo-ngaphakathi kunye namaxabiso okuguqula usebenzisa oopopayi.
tags: oopayiweyooopopayi gifoopopayioopopayi be-imeyile
Amanqaku amakhulu aVumbuluka ngokuhamba kwexesha